10 French-arọ na ha ma ama Oge gboo Music
Ọtụtụ egwu ọ mebere narị afọ nke 20 na-ewepụtara ama French-arọ na ha oge gboo music. Ọ bụ ezie na-emepụta narị afọ gara aga oge a egwú ka na-na nrube nke ọtụtụ nke ha ọrụ. Ọ dịghị ego nke otuto na accolades ga-eme ikpe ziri ezi ka ịrịba mmetụta nke ndị a French-arọ. Nyere n'okpuru bụ iri n'ime ndị kasị ama French-arọ na ha ma ama oge gboo music. Ha Genres bụ obosara na iche iche. Otú ọ dị, nke a nanị na-enye otu nnyocha na nkenke iwebata ka ndụ ha dị iche iche na egwú ikwọ.
Part6.Claude-Achille Debussy r
Part10. Guillaume de Machaut
Download music free na TunesGo si internet
1) Josef-Maurice Ravel:
Ravel a mụrụ na 1875 na Basque obodo nke Ciboure, France. Ọ bụ onye dere, pianist na a eduzi-ejikọta ya na impressionism. Ravel nyere mbụ ya n'ihu ọha arụmọrụ na afọ nke 14. Ya zuru ezu ọrụ ikere iri asatọ na ise. Ravel jụrụ niile ala ukpono na Legion d'honneur ma nwetara asọpụrụ doctorate si University nke Oxford. Ọ nwụrụ na 1937 na-eli ọzọ nne na nna ya na Levallois-Perret. Ya kasị ama ọrụ na-esonụ:
The aba ime mgbịrịgba
Joan nke Arc
The nwatakịrị na nwa na sortileges
Mụrụ na 1908 a dere na organist nwekwara ihe ornithologist ndị na-ebu ya na Roman Katọlik n'ihi ya iberibe. Messiaen malitere composing na a nnọọ n'oge afọ na mere ihu ọha ya mpụta mbụ na 1931 na ya orchestral Suite. Ọrụ ya na-egosipụta nkà mmụta okpukpe nke Chineke mgbapụta na akụkọ ifo mmewere Shakespeare. Messiaen bụ mgbe ka onye kwuru na ọ hụrụ na agba na music. Ọ na-na mmasị site na birdsong na webatara ya n'ime ọtụtụ n'ime ọrụ ya. N'etiti ndị ya ọtụtụ egwú na-arụ ọrụ kasị pụta ìhè omume bụ ndị na-esonụ.
Le oriri celeste
Ọnwụ nke ọtụtụ
The àjà oubliees
Atọ abụ olu ụtọ
The Resplendent Ili
Faure egwú ikwọ ka ọtụtụ na ya dịkọrọ ndụ. Mụrụ na 1845 na a cultured ezinụlọ a French dere mgbe nwere oge zuru ezu iji ide na nwere agbahapụ ime obodo na mgbe e mesịrị afọ ime ikwọ. Ya dee ọrụ were a n'aka na afọ nke 31 na mbụ ya violin sonata arụmọrụ. N'afọ 1908 a kpọrọ ya na ịrụ na Buckingham Obí na meghere ọtụtụ ụzọ. Fernandes mere genre nke eriri quartet na ọ dechara ọnwa abụọ tupu ọ nwụọ ma ama. Ọ na-kasị mara maka ndị na-esonụ ọrụ.
Ise abụ olu ụtọ Venice
-Ewere dị ka ihe kasị mkpa music theorist nke ya oge Rameau onye a mụrụ na 1683 bụ nnọọ zoro ezo mmadụ. A kụziiri ya music tupu ya nwere ike na-agụ ma ọ bụ dee. N'akwụkwọ nke treatise on Harmony na 1722 bụ onye mbụ o nkụrụ ama. Na afọ nke 50 ọ malitere ya operatic ọrụ na e mesịrị mere ukara ikpe egwú si ebe ọ dọtara a eze penshion. A ọnwa ole na ole tupu ọnwụ ya ọ na-mere a naiti nke Ordre de Saint-Michel. Raara onwe ya nye usoro ihe nkiri bụ ìhè na-esonụ ochie.
The gallant Indies
Castor na Pollux
Otu eccentric site na okike Satie bụ a dere na pianist onye akpawo nganga onwe ya na a na-akpọ 'phonometrician'. Mụrụ na 1866 na Normandy ezinụlọ ya kwagara Paris mgbe ọ dị afọ anọ. N'ebe ahụ, ọ e kwetara na Paris Conservatoire na A kpọrọ 'na laziest amụrụ na Conservatoire'. Satie malitere ọrụ ya na 1892 na mbụ ya mejupụtara. Satie ikpeazụ ikwọ abụọ 1924 ballets. Ọ nwụrụ na 1925 nke imeju nke imeju mere ruru afọ nke oké mmanya. O rughi ịga nke ọma n'ihi ya na-esonụ egwú ikwọ.
Choral ihu abụọ
N'etiti ndị kasị akpa-arọ narị afọ nke 20 Debussy aha atụmatụ ihe ọtụtụ ugboro. Enye akamana ke 1862 ke Saint-Germain-en-Laye. Site 1890s ọ malitere ịzụlite ya onwe ya egwú flair mgbe anụ Javanese gamelan music. Ọ malitekwara ọtụtụ opera oru ngo ma ahụ ike ya na-emezughị ya ukwu na ọtụtụ n'ime ha nọ na-ekpe emechaghi. Na 22nd nke August 2013 na ncheta nke ya ọmụmụ Google raara a n'ịgba Google Doodle. Debussy ama maka ndị na-esonụ nke ya Impressionist egwú ọrụ.
The Ike Part
The nwaanyị elue
Anọ Serious Songs
7) Hector Berlioz: a
Kasị dị ịrịba ama onyinye nke Berlioz ka egwú n'ụwa bụ ya treatise on Instrumentation. Mụrụ na 1803, ọ bụ a Ihunanya dere bụ ndị mụtara kwekọrọ si Akwụkwọ naanị ya. Berlioz malitere composing mgbe anụ abụọ usoro ihe nkiri site Gaspare Spontini onye ọ nọgidere na-enwe ogologo-okwu enyi. Ọ bụ n'etiti 1830 na 1847 na o dere ya kasị ewu ewu na-atachi obi ọrụ gụnyere 50 songs na ozokwa mepụtara Romanticism. Ọ nwụrụ na 1869 mgbe composing ụfọdụ kpochapụwo iberibe music dị ka ndị na-esonụ.
Harold na Italy
Romeo na Juliet
A dere, organist, eduzi na a pianist, Saint-Saens a mụrụ na 1835 onye mere ya mpụta mbụ na afọ nke iri. Na 1848 ọ e kwetara na Paris Conservatoire mgbe ọ na-otu olu tozuru oke mbụ na-agbata n'ọsọ na a mpi haziri site Societe Sainte-Cecile. Ke 1868, ọ premiered mbụ ya orchestral ọrụ na ghọrọ a ma ama na ọnụ ọgụgụ na egwú ụwa. Na 1913 o nyere ya gaa nke ọma egwu na Paris na njem gafee Atlantic-azụ ego maka agha charities. Ọ hapụrụ ndị na-esonụ egwú ikwọ.
Mmeghe na Rondo Capriccioso
Nke abụọ Piano concerto
Akpa cello concerto
Samson na Delilah
Poulenc si ikwọ agụnye olu ụtọ, solo piano ọrụ, ụlọ music, usoro ihe nkiri, choral iberibe, ballets, na orchestral egwu music. Ọ bụ onye dere na pianist na a mụrụ na 1899.-eto, Poulenc batara na kọntaktị na ọtụtụ egwú-arọ onye mmetụta dị ukwuu ya ọrụ. O mere ya mpụta mbụ na 1917 na ya Rapsodie negre a ise-ije mpempe maka baritone na ụlọ ìgwè. Poulenc chigharịkwuuru opera ya ikpeazụ afọ. Ụfọdụ n'ime ya kasị dị mkpa ọrụ na-na-esonụ.
Ara nke Tiresias
Dialogues nke Carmelites
Atọ perpetual ngagharị
A ochie na-ede uri na andiwet mụrụ na 1300 Machaut mgbe Bilie Eze John on njem ya gburugburu Europe. Ya lyric mmepụta comprises gburugburu 400 poems, ego music na mesoo courtly ịhụnanya na dị nsọ music gụnyere nke ya okirikiri ọnọdụ nke uka. Ọ na-eji onwe ya dị ka ya in-a me persona na ọtụtụ nke ya uri. Machaut ukwuu n'ime ekewet ya ego music na ise Genres: na Lai, na virelai, na motet, na ballade, na rondeau. N'okpuru ebe a bụ ya kasị ama ikwọ.
Amours dịghị mma
Dị otú ahụ achia ochi na aka
Iguzosi ike n'ihe, na mgbe oge
Ọ bụ ezie na a mụrụ na Italy ke 1632 Lully, a dere, instrumentalist na a-agba egwú disavowed ọ bụla Italian mmetụta na ya music. Na-eto eto ọ mụtara na-egwu guitar na violin na kwa uwe dị Harlequin n'oge Mardi Gras. Lully si music mara maka ike ya, liveliness na nke miri emi mmetụta uche agwa na-emepụta a buu mgbanwe ke ikpe. Ya usoro ihe nkiri a kọwara dị ka "ọdachi na music". Lully nwụrụ site ure anụ na oria ya ụbụrụ. Ya nọ egwú ndụ emepụta ndị na-esonụ egwú iberibe.
Cadmus na Hermoine
Alcest ma ọ bụ Triumph of Alcide
The egwú masterpieces nke oké French-arọ na-mara maka omimi na ịrịba onyinye mere na ndị egwú ubi. Ha na-dokwara-asọpụrụ maka sensory ọdịnaya na ndị a ma ama edemede ịke. N'elu-e kwuru French-arọ ji nlezianya kere ọ bụla n'ime ha masterpieces nke ụfọdụ na-kwetara mgbe ọ nwụsịrị. Ụfọdụ n'ime ha bụ protégées na ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ oké arọ bịara n'ihu ha. N'adịghị ka ndị music-arọ nke na-adịbeghị anya azụmahịa bụ bụghị dị ka jupụtara ebe nile na Baroque oge. N'ihi ya, ọtụtụ n'ime ha nwụrụ dị ka paupers.
5 Best Music Download App maka Mobile 2015
Ebe m ga-free downloadable music?
Top 10 House Music Artists na ha Famous Music
Olee otú Download Music N'iwu
> Resource> Music> Iji 10 French-arọ na ha Famous Oge gboo Music